အဘယ်ကြောင့် MIAMI U သည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကျောင်းဖြစ်သည် - သတင်း
365 ရက်စာအုပ်2မှာဖြစ်ပျက်
ကောင်းပြီ, သင်ကလုယူကြသည်မဟုတ်လော ဖလော်ရီဒါတွင်ကျောင်းတက်နေစဉ် -
မဟုတ်ဘူး၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်မှာ -
လူကြိုက်များသောတီရှပ်ဖတ်သည့်အခါဖလော်ရီဒါသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်စဉ်ကတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးရောက်ရှိစဉ်ကအဘယ်ကြောင့်မိုင်ယာမီ OH အားအဘယ်ကြောင့်အဆက်မပြတ်ရှင်းလင်းရမည်နည်း။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဂုဏ်အသရေသည် ၁၈၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ရှိဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်သမိုင်းနှင့်အစဉ်အလာအရမည်သူမျှယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
ရောဘတ် Frost ကရဲ့ကဗျာ
သငျသညျကျော်ကြားသောကဗျာအကြောင်းကိုအများကြီးမသိလျှင်ပင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ဤကောင်လေးကိုကြားဖူးတယ်နေကြသည်။ တစ်ချိန်က Robert Frost သည်မိုင်ယာမီအကြောင်းရေးခဲ့သည် အစဉ်အဆက်ရှိကွောငျးအလှဆုံးကျောင်းဝင်း။
သင်ဤကျောင်းဝင်းပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုလျှင်, သူသည်မှန်တယ်နားလည်သဘောပေါက်ချင်ပါတယ်။ မိုင်ယာမီကျောင်းသားများ၏ Instagram အကောင့်များသည်အဘယ်ကြောင့်အနီရောင်အုတ်အဆောက်အအုံများသာဖြစ်သည်ကိုယခုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမှသည်လိပ်ခေါင်းများကိုပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ချစ်လှစွာသောအရသာရှိသည့်လိပ်များကိုစားခြင်းအထိမိုင်ယာမီသည်ရိုးရာဓလေ့များပြားသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကအနည်းငယ်လိုက်တယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသစ်ပင်များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းများပေါ်တွင်သင်အဘယ်ကြောင့်မသွားသင့်သည်ကိုကျောင်းသားများသာသိကြသည်။
အောက်စဖို့ဒ်သည်အနုပညာရှင်အတော်များများကိုမကြာခဏတက်ရောက်လေ့ရှိပြီးရိုင်ယန်ဂေါ့လင်ကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ Yup, Gosling နှင့် George Clooney မိုင်ယာမီပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက် 2011 ခုနှစ်ရိုက်ကူးတစ်လကာလအတွင်းငါတို့ရှိသမျှသည်ကျောင်းသားများကဲ့သို့ မတ်လ၏ Ides , သောလယ်သမားစီးပွားရေးကျောင်းတွင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ * ဆွန်း *
သူသည်ယခုလက်ရှိမီဒီယာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကောင်မဖြစ်သော်လည်းအိုလံပစ်ရေကူးသမား Ryan Lochte သည် ၄ ​​ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရေကန်တွင်ရေကူးခဲ့သည်။
အောက်စ်ဖို့, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, တခါထပ်မဲပေးခဲ့သည် အမေရိကရှိ # 1 ကောလိပ်မြို့ ။ ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှတကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးမြို့ရှိရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းအကောင်းဆုံးလူများလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နံပါတ် ၂ ရရှိသည့်အခါသင်၏မိုင်ယာမီပေါင်းစည်းရေးကိုရှာဖွေရန်မခက်ခဲပါ အပူဆုံးမိန်းကလေးများ နှင့် # 1 အပူဆုံးယောက်ျားတွေ ။ လုံလောက်ပါတယ်
ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေအကြောင်းပြောရရင်ဒီဟာကငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲ။ စိန့်ပက်ထရစ်နေ့တွင်ကလေးများအားလုံးလုံးလျားလျားဖြုန်းတီးရန်ကလေးများကိုတားဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်မိုင်ယာမီအစိုးရသည်အိုင်ယာလန်အားလပ်ရက်နှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်ရန်နွေ ဦး ရာသီအားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ကျောင်းသားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ။ အစဉ်အမြဲကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးအားလပ်ရက်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်! ဒါဟာအလေးအနက်ထားတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားရဲ့ခရစ်စမတ်ပါပဲ။ ဘာလို့မနက် ၃ နာရီမှာထတာလဲ။ သောက်ဘို့သာ။ ကျနော်တို့ဒီမှော်နေ့အဘို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးစောင့်ပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း OxVegas ကဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဘီယာ၏ $ 1 အိုး
အုတ်မှာသောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့နေ့လည်ခင်းသည်ဖရတ်ကောင်လေး၏ Nirvana ဖြစ်သည်။ ကောလိပ်သည်သင်မှအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြီးကြပ်မှုမရှိသောမှော်အချိန်ဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံလည်းမရှိပါ။ သမ္မာသတိရှိသောသူသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ Beat the Clock နာရီကိုသွားပါ။
BTC တကယ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ 1:00 မှာအိုးတစ်ခုစီ $ 1 ဖြစ်ပါတယ်။ 2:00 မှာစျေးနှုန်း $2အထိတက်။ ဘားက၎င်း၏ပုံမှန်ညစဉ်ညတိုင်း shenanigans အဘို့အဖွင့်သည်အထိဒါပေါ်, ဒါပေါ်နှင့်ဒါပေါ်။
သို့သော်ညနေ ၂:၅၀ နာရီတွင်နယူးဘားသို့လမ်းတစ်လမ်းလုံးကို ဖြတ်၍ သွားနိုင်ပြီးကျန်ညတစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၂.၅၀ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Broken Clock အမည်။ အဘယ်အရာကိုမျှကြောင်းထက်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။
သင်ဟာပုံမှန်လူတစ်ယောက်လိုသင့်ရဲ့ပေါင်မုန့်တီထွင်နေတုန်းပဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ရေနွေးငွေ့သွားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်အောက်စ်ဖို့၏အထင်ကရ Bagel & Deli ကိုစမ်းကြည့်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြန်သွားစရာမရှိတော့ပါ။
ဒါဟာသင်ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်ဒြပ်ထုနှင့်မတူဘဲခရင်မ်ဒိန်ခဲကိုကြံစည်ထားသောငြီးငွေ့မှုနှင့်မတူဘဲ Bagel & Deli သည်အရသာရှိသောစကားလုံးကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်စေသည်။
ပထမ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးအစားဖြစ်သောဂျုံ၊ ကြက်သွန်၊ ဒိန်ခဲ၊ လွင်ပြင်၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ pumpernickel စသည်ဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ကြက်ဆင်၊ ဒါဟာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကောင်းကင်ဘုံပါပဲ။
လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ Sausage Fest၊ The Blonde Bombshell၊ The Tanya Harding Club, The Lookout နှင့်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံး The Messy Katie ကဲ့သို့သောဖန်တီးမှုအမည်များဖြစ်သည်။ အချို့သောထူးခြားသောရွေးချယ်မှုများတွင် Doritos၊ (Crunch and Munch) စီးကရက်၊ (After Burner) သို့မဟုတ် cookie (Cookie Monster) တို့ဖြင့်ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဘောလုံးလား ငါတို့အဲဒါမရှိဘူး။ ဘောလုံး။ Ehhh ယူပါ၊ ဘတ်စကက်ဘောအဆင်ပြေပါတယ် ဟော်ကီ? ဒါကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲ။
မြူစက်များနှင့်ပြည့်နေသောထုပ်ပိုးထားသောဟော်ကီနယ်ပယ်များ၊ တံပိုးမှုတ်သံများနှင့်မိုင်ယာမီမှကျောင်းသားများသည်သင်၏သွေးစီးဆင်းမှုကိုရရှိရန်ရေခဲကိုယူနေသောကျွန်ုပ်တို့၏ယောက်ျားလေးများရောက်ရှိနေကြောင်းအချက်ပြခြင်းနှင့်တူသည်။ ဒါကအောက်တိုဘာလမှမတ်လတိုင်းတနင်္ဂနွေတိုင်းဖြစ်ပျက်နေသည်။
မှန်ကန်တဲ့သာလျှင်, Miamians တို့သည်သင်၏လက်ချောင်းကိုလေထဲ၌ညွှန်ပြခြင်းနှင့် Gooooals ပိုမိုမျှော်လင့်ခြင်းအပေါ်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသိကြသည်။ သငျသညျမိမိအဆကျဆံရေးအမှားအတွက်သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆန့်ကျင်ဂိုးသမားစွပ်စွဲအဖြစ်။ အပြင်ကအားလုံးပါပဲ သူ အမှား, အဆန်ခါ။
Redhawk ဖြစ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြရန်ခဲယဉ်းသည်။ အမေရိကန်သမ္မတများ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၊ အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများ၏စီအီးအိုများသို့မဟုတ် NFL ကြယ်ပွင့်များနှင့်သင်လမ်းလျှောက်ပြီးသည်အထိမိုင်ယာမီကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းသည်မည်မျှအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဂုဏ်။ ထာဝရနှင့်တစ်ရက်။ MU ။